Dhalaanka socodalka dalkaan yimid oo ah kuwo ku badan adeegsigga maandooriyaha | Somaliska
Nolosha / Socdaalka / Somaliska
Dhalaanka socodalka dalkaan yimid oo ah kuwo ku badan adeegsigga maandooriyaha
Tirro koob ay sameeysay hey’adda caafimaadka bulshadda, ayaa sheegaya in degmooyinka goboladda dalka qaarkood dhalaanka keli socodka ah ee ku nooli aad u adeegsadaan maandooriyaha. Tanoo ah mid aad u sareeysa marka la bar bardhigo kuwa kale ee dalka ku kora.
Warbbixinta ayaa sidoo kale sheegeeysa in kooxdani ay ku heereysan yihiin caafimaad darro xagga maskaxda ah, islamarkaasina ay yihiin kuwa bartilmaameedka ah, marka loo eeggo kuwa iyaga waalidkood la socda dalka yimid. Qorshe dejin ay sameeysay maamulka deegaanada Uppsala län ee dalkaan Iswiidhan,ayaa sheegaya in sanadihii 2015 ilaa 2017 tobbankii qof ee dhalaanka keli socoda ah laga helayo kuwo adeegsado maandooriyaha. Tirrada hadda la runsan yahay oo deegaanadaas hoos yimaada ee adeegsada maanrooriyaha ayaa lugu sheegay 500.
Dhinaca kale booliska gobolka Uppsala ayaa sheegaya in dhibaatooyin soo laa laabtay oo la xirriira maandooriyaha ay salka ku heeyso dhalinyaradaasi ajanbiga ah ee keli socodka ah oo lug ku leh. Arrintan ayaana haatan deegannadda hoos yimaada Uppsala ku baaqayaan in lala yimaado qorshe wax looga qabanayo.